Fotoana izao hiatrehana ny fahasalaman’ny saina aty aorian’ny COVID-19 · Global Voices teny Malagasy
Marary mijaly mirediredy, dona sy rarin-tsaina taorian'ny fitsaboana
Voadika ny 20 Aogositra 2020 12:04 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, русский, polski, عربي, Deutsch, Français, Català, Español
Sary: Oscar Navarrete, Nahazoana alàlana
Isika olombelona sahala amin'ny mirona mankamin'ny fanamaivanana ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-pihetsehampo ananan'ny vatantsika. Ataontsika irony sangy toy ny hoe “Toa ho lasa adala aho izany” na “Makarakara be izany fitadidiako izany”, izay mety ho fomba fiarovantena manoloana ireo tena olana ao ambadika, fomba iray handosirana ny fiharatsian'ny fahafahana mamanta-javatra manjo antsika, na angamba tsy fahafantarana fotsiny izao. Marina daholo ny tsirairay amin'ireny toedraharaha ireny, satria isika rehetra mihetsika, mikirakira, mandika ary mahatsapa zavatra amin'ny fombantsika manokana. Araka izany, ndeha horesahantsika ny fiantraikan'ny COVID-19 amin'ny fahasalaman'ny saintsika sy ny fomba mety hitondran'io valanaretina io fiharatsiana goavana amin'ny fahafaha-mahatsapàn'ireo marary sisampaty taminy. Mety ho fahavoazana tsy azo tsaboina intsony raha tsy atrehantsika amin'ny fomba tena tokony ho izy.
Ndeha hoeritreretintsika hoe any Nikaragoà isika, toerana niaviako, sady toerana tsy misy drafitr'asa napetraka ho fanohanana ny fahasalaman'ny saina, eny fa na dia lalàna manokana natao hitsaboana azy io aza. Amin'ny maha-mpianatra ho mpitsabo ahy, dia vavolombelona nahita sy niaina ny rafi-pahasalamàna tao amin'ny fireneko aho, avy ao anatiny, ary afaka nahita fa betsaka ny tsy fahatomombanany. Tsy laharampahamehana tao amin'ny firenena ny resaka fahasalaman'ny saina noho ireo olana pôlitika sy loza voajanahary nifanesy. Ny fanjakàna tsy miraharaha no sady tsy mampiasa vola sahaza amina zavatra goavana be toy ny fahasalamana. Vokany, matroka be ny vodilanitry ny fiarahamonina nikaragoaiàna raha ny fiarenana ara-pahasalamana tanteraka ho an”ireo olona sisampatin'ny COVID-19 no resahana.
Rehefa avy niresaka tamin'olona nisedra dona noho ny tsy nahafahany nifoka rivotra, ary namaky lahatsoratra iray tao amin'ny The Atlantic momba ny soritraretin'ny rediredy ary ny fifandraisany amin'ny “coronavirus”, dia tonga tamin'ny tsoakevitra iray aho, hoe ilaintsika ny miresaka momba ny fahasalaman'ny saina sy ny mety hahatonga ny fikorontanana ara-tsaina hiharatsy kokoa eny amin'ireo olona sisampatin'ny COVID-19.
Rediredy, sa toetena misafotofoto
Tsy afaka ataontsika ny hiresaka COVID-19 nefa tsy hiteny momba ny olana henjana ara-pisefoana (SDRA / ARDS), izay ateraky ny fahasimbana goavana ao amin'ny havokavoka sy ny fidinan'ny tahan'ny ôksizena ho ambany dia ambany any anaty lalandrà (hypoxemia). Amin'ny ankapobeny io soritraretina io dia mitaky fandraisana an-tànana henjana, toy ny fanomezana rivotra amin'ny fampiasàna ny mekanika, ary araka izany dia fandraisana an-tànana any amin'ny sampana famelomana aina mba hahamarin-toerana ny fahasalaman'ireo marary. Araka ny ambaran'ireo mpikaroka, ny “hypoxaemia”, izay manamarika manokana ny SDRA, dia mety hampirediredy, antsoina ihany koa hoe “toetena misafotofoto”, eo amin'ireo marary any amin'ny sampana famelomana aina.
Araka ny lazain'ny boky momba ny fitsaboana saina nosoratan'ireo mpikaroka Juan Lopez-Ibor Aliño sy Manuel Valdés Miyar, ao anatin'io toetena io, mety hahatsapa / handalo fihenan'ny fahatsiarovantena ireo marary, ary fiovàn'ny fahafahany mahatsapa zavatra, izay mivoatra tsikelikely mandritra ny fotoana maharitra.
Asongadin'ilay lahatsoratry ny The Atlantic ireo fitantarana avy amin'ireo sisampatin'ny COVID-19, izay mitantara ny zavatra mahatsiravina niainan-dry zareo, toy ny mahatsapa hoe boriana ny tànana na ny tongotr'izy ireo, na koa toy ny hoe manatrika ny fandevenana ny tenany ihany. Nandritra ny taona marobe, nohalalinin'ireo mpahay siansa ny fifandraisana mivantana misy eo amin'ny SDRA sy ny fiforonan'ilay toetena mirediredy manjo ireo olona mandalo ny sampana famelomana aina, saingy vao mainka vokatra hafa mampangorintsina no hita: rehefa mandeha ny fotoana dia misy misoko ao amin'ireny olona nandalo io vanimpotoana io ny fiharatsian'ny fahafahany mahatsapa zavatra, izay tsy voatily any anatin'ireo retsika hafa toa ny fitadidiana, ny fifantohantsaina, ny hafainganana ikirakiran'ny atidoha na anatanterahany zavatra iray, araka ny noporofoin'ny Hopkins et al.
Tebiteby sy hakiviana
Ankehitriny , ndeha isika hifantoka amina fepetra roa izay tena ijalian'ny olona sy zara raha misy mahatsapa: ny tebiteby sy ny hakiviana. Araka ny lazain'ilay Nikaragoaiàna psikôlôgy, Junieth Cruz, tena azo inoana fa ny ankamaroan'ny olona no nandalo vanimpotoana iray nampitebiteby, farafahakeliny indray mandeha tamin'ny fiainany; na izany aza, tsy ananantsika ny fanabeazana ara-pahasalamana sahaza sy manaiky ireo soritraretina.
Asehon'ireo fandinihana mifandraika amin'ny fahatafavoahana avy ao amin'ny toerana famelomana aina fa taorian'ny nivoahan-dry zareo ny hôpitaly, marobe ireo olona no lasa miaina olana ara-tsaina, toy ny nofy ratsy, ny fahamora tohina (mora mikoropaka), ny “agoraphobia” (Avy amin'ny mpandika: ny ‘agoraphobia’ dia tahotra ny mety tsy hahita famonjena raha sanatria misy manjo azy), ny tebiteby sy ny hakiviana. Fanampin'izany, hita mazàna ny “post-traumatic stress disorder (PTSD)” – fikorontanana taorian'ny dona nahazo – amin'ireo olona miaina fitandremana fatratra, miverina miaina indray ireo dona, ary ny fisorohana.
Toa mandritra ny taona voalohany no hita mihatsara ny soritraretin'ny rarintsaina, aorian'ny fampodiana ilay marary, raha maharitra taona iray mahery kosa ny tebiteby, saingy ny PTSD dia aretina iray entina fotoana maharitra, araka ny fandalinana iray nataon'i Myhren et al. Mandritra izany fotoana izany, nasehon'i H. Rothenhäusler et al fa ny fiharatsian'ny fahafahana mahatsapa zavatra sy ny fiantraikany dia afaka hita aorian'ny taona enina nampodiana ny marary, ary 46% monja amin'ireo olona no ho afaka miverina amin'ny fomba fanaony fahiny.
Raha mijery tsara ny zavamisy isika momba ny olana ateraky ny COVID-19 amin”ny fahasalamam-bahoaka, mba firy amin'ireo sisampaty no ho afaka hahazo fikarakaràna ny fahasalamana ara-tsainan-dry zareo? Mba hanao zavatra ve ireo manampahefana misahana ny fahasalamana mba ho entina manamaviana ny olan'ny fahasalamana ara-tsaina aorian'ilay valanaretina? Ireo dia roa monja amin'izay mety ho fanontaniana azontsika eritreretina, tsy hoe ao Nikaragoà fotsiny ihany, fa any amin'ireo firenena hafa marobe erantany.
Ho famintinana, matetika isika no manao hadisoana amin'ny fieritreretana ny fahasalamana ho toy ny tsy fisian'ny fahazoana aina ara-batana fotsiny, tsy mandray akory ho anaty kajikajy ny zavamisy hoe raha te-hiaina anaty fahasalamana, tsy maintsy jerentsika ny fampifandanjàna ny fahasalamana ara-batana sy ny fahasalamana ara-tsaina. Ny fisainana ny fikarakarana manokana ny tena ho toy ny asan-devoly, sy ny fanaovana ho zavapady ny firesahana ireo ady ara-tsaina dia zavatra tsy maintsy atrehantsika mba hisorohana ny fahatratrarana ny ‘pic’ – haavo ambony indrindra – amin'ny isan'ireo marary tratry ny fahaketrahana sy ny aretin-tsaina, ary atao ao an-tsaina mandrakariva ny fiantraika psikôlôjika ho ateraky ny COVID-19, anaty fotoana fohy sy maharitra, ary isika dia tsy maintsy mampirina ny hambontsika ka manomboka manaiky ny fanampiana ho an'ny fahasalaman'ny saintsika.
Tena fotoana izao, tsy ilàna andraso andraso, tsy maintsy idirantsika ireny fifanakalozankevitra momba ny fahasambarana ara-batana sy ara-tsaina ho an'ny tsirairay ireny, ary alavirintsika ireo fomba filaza sy fanao efa lany andro toy ny hoe “Tsy handeha hanatona mpitsabo saina izany mihitsy aho satria tsy adala.”
Tantaran'ny Nikaragoa farany
29 Septambra 2020Mediam-bahoaka
08 Septambra 2020Fanampenam-bava